Ha ka baaqsan in aad bixiso codkaaga – Aminawehelie.me
June 22, 2016 May 13, 2017 by aminawehelie
Qof walba adduunka halkii eebbe u garto ayuu kaga noolaanayaa, kol eey tahay cirifka waqooyi, dhulweynaha carabta, amase Hawai iyo salka dhulka cusbooleyda ah ee shiinaha.
Dunida waxaa ku nool dad halgan ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen nidaam ay codkooda ku dhiibtaan wax kasta oo noloshooda quseeya, dalkeena hooyo ee Soomaaliya dadka ku nooli waxeey ka mid yihiin dadweynaha dunida ee aan fursadaas badiyaa helin, waxaana u wada hamuun qabnaa marka aanu joogno Soomaaliya oo ah dhulkii hooyo ee lama huraanka ahaa, in maalin uun ay inoo dhalato cadceedu iyadoo ay suurtagal tahay idanka eebbe, inagoo codkeena dhiibana, taasi weli ilaaheey xugunkiis suurtagal ma noqon, waase dhowreynaa.
Hadaba muddo ka badan 15 sanno oo aan ku noolaa dhulweynaha boqortooyooyinka midoobey (United Kingdom) kolbana aan ahaa u dhaq-dhaqaaqe arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada aan dhalasho ahaa ka soo jeedo ee Soomaaliyeed ee UK ku nool, arrimaha ay badanaa dadkeenu ka cawdaan waa in aaneey helin xuquuqda ay dalkan Britian ku leeyihiin, kuligaayo waxaanu muujinaa wax aan ka badneyn catoow afka uun ku kooban oo aanu ka keeno mushkiladaha inaga heysta dhinaca Guryaha, lacagaha kaalmada ee lagu taakuleeyo dadka aan shaqeynin ama tabar ay ku shaqeeyaan aan lahayn, kaalmooyinka la siiyo dadka naafada ah, helista iskuullada aanu doorano ee deegaannada aanu ku nool nahay, la midoobida qoysaskii aanu dalkii ama xerooyin qaxooti kaga soo tagnay, IWM.
Laakiin waxaa jirta arin aanan is weydiinin badanaa, oo ah horta sideenu arrimahaas ku heli karnaa haddii aanan bixin xilliyada codadka la dhiibanayooo aanan codkeena soo dhiiban doorashooyinka wadanka ka dhaca waxeey doonaanba ha ahaadeene?
Dadkeena badankood waxaa lagu kari la’yahay in ay doorashooyinka inta sharcigu u saamaxo ay ka qeyb-qaataan oo ay codkooda ka dhiibtaan, waxaad arkeeysaa qof Soomaali ah oo wadanka joogay 10 sanno ka badan oo heysta dhalshada Biritan oo aan hadana waligiis doorasho qur ah ka qeybgelin, hadana maalin kasta uun cabanaya oo wax uun ka cabanaya.
Dad badan oo isla Soomaali kale ahi waxeey ku macneeyeen in aanu nahay bulsha caajis badan oo jecel in wax kastaaba ay sahal isaga helaan iyagoo aan wax dadaal ah gelin, amaba aan waxba muhiimad ah siinin qaabka ay suurtagalka ku tahay in ay ku helayaan xuquuqahooda.
Fekerkaas wax badan ayaa ka jira, laakiin badanaa marka si kale loo yiraahdo, waa inagoo meel kasta oo aan tagno ku ah dad indho-xiran oo iyaga uun isku kooban, misna aan la imaanin wax furfurnaan ah oo ay kaga qeybqataan arrimaha iyaga quseeya oo noloshooda ku xeeran.
Kulligeen waxaanu nahay ummad ku wada mashquulsan wixii saakayto dalkii laga soo sheego oo kali ah oo badanaa ah joogaa-maqane.
Wixii ka dhacaya wadankaad ku nooshahay kama dhego xirnaan kartid, waana ku qoseeyaan, mana lahan marmarsiinyo.
hadaad dalka aad joogto ma maaranto maxaad u joogtaaba maad isaga tagtid?
Maahmaah Soomaaliyeed ayaa oraneysa: BAD KU ROON AYAA BEER KU ROON, BEER KU ROON AYAA BERRI KU ROON. oo laga wada qofkii meel uu joogaba wax uun ku wanaagsan meel kasta oo uu tagana wax uun buu ku wanaagsan yahay.
Aan u soo dhaadhaco dulucda iyo ujeedka qormadeeyda e, waa muhiim in berrito oo bisha June tahay 23-ka, sanadkan 2016-ka aanu baxno oo aanu codkeena ka dhiibano doorashada aftida muhiimada weyn leh oo loogu codeynayo LEAVE (KA BIXID) iyo REMAIN (KU JIRID) wadanka Biritian uu ku go’aansanayo xubinnimada Midowga Yurub.
Ololaha oo muddo dheer soo socday, warbaahinta Ingiriiska iyo tan adduunkana si weyn loogu falanqeeyey misna doodo fara badan la isku weydaarsaday, maxeey ka dhigan tahay haddii UK ka baxdo Midowga Yurub? maxeyse ka dhigan tahay haddii UK ku sii jirto Midowga Yurub?
Aan ku hor maro dooda ah in ay UK dani ugu jirto in ay ka baxdo, maxaa dhacaya:
qolyaha u ololeynaya LEAVE (KA bixista) waxeey wajiga hore ku sharaxdeen in dadka soo galootiga ah ee Yurub ka imaanaya ay culeys badan ku hayaan UK, guriyihii, shaqooyinkii iyo iskuuladiiba, waxey kaloo ku doodayaan in UK ay siiso sanadkii 12.9 Billion, lacagtaas oo sanadkii hore ee 2015-kii iyo wixii ka horeeyey ahayd, 17.8 Billion, waayoo sanadkii 1984-tii ayeey raisulwasaaraddii Biritan ee Margaret Thatcher, sidaas kula heshiisan Midowga Yurub.
qolyaha ku doodaya REMAIN (KU JIRISTA) ayaa iyaguna leh waa been oo lacagtu intaas ma dhama oo isku celceliskii marka laga reebo inta Midowga Yurub siyaabo kale uga soo noqota waxey noqoneysaa lacagta ay UK ku bixiso xubinnimada Midowga Yurub 8 Bilyan oo gini.
Doodu waa dheer tahay waana ballaaran tahay, hase yeeshee waxey kaloo qolyaha raba in UK ka sii mid ahaato Midowga Yurub ku doodayaan in haddii UK ka tanasusho xibinimadeeda EU ay soo food saari doonaan dhibaatooyin dhaqaale, kuwo ku yimaada dhinaca adeegga caafimaadka iyo dhibaatooyin ka dhasha dhinaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga xorta ah oo ay hada UK hesho.
Waxeey weliba carrabka ku sii adkeynayaan in waaxda caafimaadka ee UK NHS oo ay hadda ka howlgalaan shaqaale u badan kuwo ka yimid Midowga Yurub, ay dhabar jab ku noqoneyso ka bixista EU-da.
Isku soo wada duuboo innaga hadaanu nahay Soomaali maxaa inoo dan ah?
Horta qolada ka duuleysa wadankeena ayaa lagu soo gurmaa, ee ka cabanaya soo galootiga, hadaanu dhankooda wax ka eegno, inaguba soo galooti ayaanu wada nahay, haddii aadan adigu ahayn aabahaa ama hooyadaa ayaa ahayd, amaba awowogaa, oo dhankaasi waxaanu soo galeynaa qolyaha laga siraad koraayo.
Dhanka dhaqaalaha waa ina sameyneysaa haddii dhaqaaluhu hoos u dhac ku yimaado, dhanka caafimaadkana sidoo kale, laakiin tan ugu darani waxey tahay, waxaa UK ku nool Soomaali badan oo ka soo guuray dalalka kale ee Midowga Yurub, oo sababo badan halkaan u yimid, Soomaalidaasi waxey UK ugu xisheen waa dhinacyo ay ka mid yihiin furfurnaanta ganacsiga, oo qofka ay u sahlan tahay in uu ganacsi shirkadeed ama mid dukaan furto.
Waxa kale oo Soomalidaasi u soo guureen arrimo la xiriira dhinaca furfurnaanta diimaha, oo UK waa ku ahaan kartaa muslim islaanimadiisa si saani ah u guta, siiba haweenku waa ku xiran karaan xijaabka waajibka ah ee dumarka muslimiinta ahi xirtaan.
Sideed doonabase ha noqotee, Soomaaliga UK joogoow, waxaa dow kuu ah in aad berrito baxdo oo codkaaga dhiibato waxaad doonataba ku codee, ama LEAVE (KA BIXID) ama REMAIN (KU JIRID), waase muhiim in aad codka aad shariga u leedahay dhiibato si rabitaanku u hirgalo.
Previous Is it hard to be a Somali single mother in western world?
Next David Cameron oo geeddi ah